Hahatonga ny Trump sy Kim Jong-un hitranga ve ny fizahantany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hahatonga ny Trump sy Kim Jong-un hitranga ve ny fizahantany?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
trump kim fahavaratra 2019
Ny fizahantany dia mety ho lakilen'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo. Nanokatra toeram-pitsangantsanganana iray vaovao i Korea Avaratra izay niantso azy io ho “tandindon'ny sivilizasiôna maoderina.”
Ny firenena mitokana dia mahita ny fizahantany ho fomba iray ahazoana vola vahiny ilaina ary fomba iray hiatrehana ny any atsimo.
Ny fizahantany dia anisan'ny entana mbola tsy nahazo fankatoavana.
Ny filoham-pirenena Koreana Tatsimo Moon Jae-in avy any Korea Atsimo tamin'ny talata dia niantso ny fifanakalozana ara-toekarena amin'i Korea Avaratra, ao anatin'izany ny famelana ny fitsidihan'ny mpizahatany Koreana Tatsimo, mba hanamaivanana ny fifanenjanana sy hampirisihana ny Avaratra hanohy ny resaka miaraka amin'i Etazonia.
Ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong-un sy ny filoham-pirenena amerikana Trump dia tsy afaka nanohy ny fivorian'izy ireo noho ny fahasamihafana.
Korea avaratra dia efa nilaza fa handray ireo mpizahatany avy any atsimo.
Ny governemantan'i Kim Jong-un dia nanomboka ny fanosehana mpitsidika vahiny maro kokoa.
Ny fifandraisana eo amin'ny mpizahatany vahiny sy ny olona eo an-toerana dia voafehy mafy ara-tantara. Na izany aza, avy amin'ny sary hita manodidina ny Internet sy porofo avy amin'ny mpandeha nankany Korea Avaratra, ireo fameperana ireo dia toa somary nilamina ihany tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Tamin'ny Janoary 2013, afaka mividy karatra SIM ao amin'ny seranam-piaramanidina Pyongyang ny vahiny, manome fidirana amin'ny antso iraisam-pirenena.
Ny fizahan-tany rehetra dia karakarain'ny iray amin'ireo birao fizahan-tany maro an'ny fanjakana, ao anatin'izany ny Korea International Travel Company (KITC), ny Korea International Sports Travel Company (KISTC), ny Korean International Taekwondo Tourism Company (KITTC) ary ny Korean International Youth Travel Company (KIYTC)